mitsipaka ny fandinihana ilay volavolan-dalàna laharana faha-001/2020 tamin’ny 26 febroary 2020. Ny didy hitsivolana lah. 2019-006 tamin’ny 28 may 2019 izay manova ny andininy sasantsasany ao amin’ny lalàna fehizoro laharana faha 2015-007 tamin’ny 03 martsa 2015 mahakasika ny fampandehanan-draharaha ny eto anivon’ny Antenimierandoholona sy ny fifidianana ary ny fanendrena ny ireo Loholona no tena mipetraka olana nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana farany teo. Nasiam-panitsiana ny and. faha-7 izay manambara ny isan` ny loholona 63 lasa ho 18. Voalaza ao amin` ny and. faharoa fa “araka ny voalazan` ny didy hitsivolana dia afaka miroso amin` ny fifidianana loholona aorian` ny fifidianana kaominaly. Ireo loholona am-perinasa araka izany dia hisahana sisa ny fampandehanan-draharaha (à titre transitoire) mandrapahatonga ny vokatra ofisialy havoakan` ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana”. Izany hoe, raha nandany ny volavolan-dalàna PL001-2020 ny Antenimierandoholona dia afaka niroso tamin` ny fifidianana loholona ny Fanjakana. Ny lalàmpanorenana anefa dia milaza mazava tsara fa dimy taona ny fe-potoam-piasan` ny fitondrana ary tsy azo hahena na koa hampitomboina (mandat impératif). Tsy azon` ny fitondrana ihany koa no manena ny isan` ny mpikambana raha tsy misy fikitihana ny lalàmpanorenana. Ny tsy nampoizin` ny fitondrana sy ireo depiote indrindra ny IRD ny “motion de rejet” nataon` ny loholona. Araka izany, tsy afaka manao n`inona n`inona ny parlemantera fa dia miverina indray eny amin` ny governemanta io volavolan-dalàna io. Maro loatra ny fandikàna lalàmpanorenana ataon` ny fitondrana. Tsy tongatonga ho azy ny nanambarana ireo didy hitsivolana miisa 9 ho tsitelotelo. Nolazaina fa ny Antenimierandoholona no fositra amin` ny fampandrosoana kanefa ny Fanjakana no manao ady am-pitaka. Asa mbola firenena tan-dalàna ihany ve i Madagasikara fa toa samy manao izay tiany sy metimety aminy ny manana seza sy fahefana?
Marigny A.Haut du formulaire